တကယ်တော့ ငရဲကြီး(၈)ထပ် ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပီး (၉)ထပ်မြောက် ငရဲပြည် အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ မေဦး… – Shwe Likes
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ မနက် ပိုင်းက ဆား လင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဒုန်းတော ရွာမှာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၁၁ ဦးဟာ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရတ ယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ဒီသတင်းဟာ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများနဲ့တကွ အလျှို အလျှို ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပြည်သူအများ ထိတ်လန့်တု န်လှုပ်ပြီး အပူမီး ကြွခြဲ့ ကပါတယ်။
ဒီသတ င်း​တွေ ကြည့်ပြီးတဲ့နောက် အလှဖန်တီး ရှင် မေဦးမှာ အလွန် စိတ်ထိခိုက် သွားရကြော င်း ခုလို facebook မှာ ရေးသားခဲ့ ပါတယ်။ ”ဖယောင်းစက် လက်ပေါ်ကျ တာတောင် ပူလို့ တော်ေ တာ်မခံနိုင်တာ…. ကြည့်ရင်း နဲ့ မျက်ရည်တွေ ကျလာရတယ်။
တကယ်တော့… ၉ ထပ်မြောက် ငရဲက မြန် မာပြည်” ဆိုပြီး နာကြည်းစွာ ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ အလှဖန် တီးရှင် မေဦးဟာ ပြည်သူ့ဘ က်တော်သားတ စ်ဦး ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အရည်အချ င်းနဲ့ တည်ကြည်ရဲရင့် တဲ့ နှလုံးသားေြ ကာင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ခံယူရရှိထား တဲ့ လူ ငယ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ မနက္ ပိုင္းက ဆား လင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုန္းေတာ ရြာမွာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ ၁၁ ဦးဟာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို႔သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရတ ယ္လို႔ သိရပါ တယ္။
ဒီသတင္းဟာ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယိုမ်ားနဲ႔တကြ အလၽွို အလၽွို ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူအမ်ား ထိတ္လန႔္တု န္လႈပ္ၿပီး အပူမီး ႂကြျခဲ့ ကပါတယ္။
ဒီသတ င္း​ေတြ ၾကည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အလွဖန္တီး ရွင္ ေမဦးမွာ အလြန္ စိတ္ထိခိုက္ သြားရေၾကာ င္း ခုလို facebook မွာ ေရးသားခဲ့ ပါတယ္။ ”ဖေယာင္းစက္ လက္ေပၚက် တာေတာင္ ပူလို႔ ေတာ္ေ တာ္မခံနိုင္တာ…. ၾကည့္ရင္း နဲ႔ မ်က္ရည္ေတြ က်လာရတယ္။
တကယ္ေတာ့… ၉ ထပ္ေျမာက္ ငရဲက ျမန္ မာျပည္” ဆိုၿပီး နာၾကည္းစြာ ေရးသား ခဲ့ပါတယ္။ အလွဖန္ တီးရွင္ ေမဦးဟာ ျပည္သူ႔ဘ က္ေတာ္သားတ စ္ဦး ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ့ အရည္အခ် င္းနဲ႔ တည္ၾကည္ရဲရင့္ တဲ့ ႏွလုံးသားေျ ကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ခ်စ္ျခင္းကို ခံယူရရွိထား တဲ့ လူ ငယ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ်သူမှာ သင်စရာမလိုပဲ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်းကြွေးကြော်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းပေါက်စလေး ရဲ့ဗီဒီယို